“Kuma qeexi karo dareenkeyga erayo” –Saalax oo ka hadlay dareenkiisa kaddib markii ay Liverpool ku guuleysatay Premier League – Gool FM
“Kuma qeexi karo dareenkeyga erayo” –Saalax oo ka hadlay dareenkiisa kaddib markii ay Liverpool ku guuleysatay Premier League
(Liverpool) 30 Juun 2020. Xiddiga kooxda Liverpool ee Maxamed Saalax ayaa ka hadlay ku guuleysiga Reds ee horyaalka Premier League, kaddib mudo dhan 30 sano ah.
Website-ka rasmiga ah ee kooxda Liverpool ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Maxamed Saalax, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waa dareen cajiib ah inaan ku guuleysto horyaalka Ingiriiska sanado badan kaddib, waa arrin u wanaagsan kooxda iyo magaalada”.
“Kuma qeexi karo dareenkeyga erayo, markii aan halkan imid waxaan iri waxaan doonayaa inaan ku guuleysto horyaalka Ingiriiska, waa waxa ugu horreeyay ee maskaxdayda kusoo dhacay”.
“Waxaan doonayay inaan ku guuleysto Premier League iyo Champions League, dadkuna waxay dhaheen hadaad dooran karto hal tartan oo kaliya muxuuna yahay? laakiin hada waxaan dhihi karaa waxaan dooran doonaa labada tartan”.
“Waa dareen weyn ee qof kasta ah, laakiin hadii aanan heli laheyn taageerida taageerayaasheena ee aduunka oo dhan, kuma guuleysan laheyn Premier League, waxay qabteen shaqo aad u wanaagsan, ciyaartoydana sidaas oo kale ayey sameeyeen”.
“Waa wax wanaagsan inaan goolal dhaliyo si aan uga caawiyo kooxda inay ku guuleysato kulamada, sidaas darteed waxaan dareemayaa inaan ku faraxsanahay halkan, wax walbana ay si wanaagsan ugu socdaan kooxda. waxaan ku faraxsanahay xaaladdan”.
“Waxaan sameynay wax walba oo aan awoodi karno, si aan uga farxino taageerayaasha, xaqiiqdii shaqo fiican ayey ka qabteen garoonka Anfield iyo intii lagu jiray kulamadii banaanka”.
Macalin Ole Gunnar Solskjær oo fariin u diray saddex ka mid ah xiddigaha kooxda Man United
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Brighton iyo Man United ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay